Saggag: Guddoomiye iyo Taliye Degmo, oo Falal Lagu Amaray in ay Sameeyaan Dib Loogu Xidhay – Rasaasa News
Saggag: Guddoomiye iyo Taliye Degmo, oo Falal Lagu Amaray in ay Sameeyaan Dib Loogu Xidhay
Jul 13, 2009 Kaalinka 5aad
“Xagan loo kicimaayo oo xasanaa lagu laayey, xagan loo kicimaayo oo waa xuduud xabashaad, cirkan xooga u dheerna xadhigeenu ma gaadho, ma inagoo xayi noolaan is xabaali karaa”, Jwxo-aan kaalmo lahayn oo kuligeen ina laysa, Kaalinkaa na kadeeday ee kolba na soo shirinaaya, kaca oo dadka laaya amarkiis na korkeena, kolka aan ka dhabayno ee dadka kawda ka saaro ee kurrarkooda an keeno, ankaan ku baxaynin bal kadeedka na haysta kobtee baan u kacnaa.
“Hadaan aamusana Adhiga laynta laga dayn maayo, hadaan hadalana waa Af Salax ku dhagg” Xuseen Buraale Alle ku Nac.
wararka nooga imanay Kaalinka Jijiga ayaan lagu kami,in oo kas iyo maag loo xidhay taliye Boolis iyo Gudoomiye degmo, Gudoomiyihii degmada sagag ee gabalka Nogob iyo waliba taliyihii saldhiga yarka ah ee degmada ayaa saaka lagu xidhay Jijiga.
Waxaa dharaarahan oo dhanba Jijiga ka socday dharbaaxooyin lagu dhufanayey dadka taagta yar ee iyagu ka fog fog dhaqaalaha iyo noloshaba Kaalinka tifta ka ah ee ay ku dabaal joogteeyaan muqayiliinta iyagu Jijiga ku dharqada.
Waxaa saddexdii biloodba mar la isug yeedhaa, maamul ku sheega waxaana la waydiiyaa sida loo kala bixiyey lacagaha dib loo qaato ee ay qaataan kuwa qaadan kara ee jooga Jijiga, waxaana xisaabta khaldanta dusha laga saaraa dadka aan is difaaci karin, oo iyaga loogu marmarsoodo, gabaladiina ayaa waxaa ka jira ONLF ee lacag maba arkaan.
Oromada ayaa waxay ku maahmaadaa “dhibaatada oo dhan waxay soo doonataa maskiinka”, Sagaga taliye Booslis oo jooga muxuu hanti ah oo uu lunsan karaa waxbaba ma gaadhee, Isbitaal ma leh, Iskuul fiican ma leh, Kornto ma leh, Jid ma leh. Waxaa intaas u sii dheer in shacabka Sagag iyo degmooyin badan oo la mid ah maalin walba la xidho ama la dilo oo lagu eedeeyo, waxaad gacan siisaan ONLF.
Waxaa gacmaha gabdhaha Gabalka nogbeed laga heli magaca ururka ONLF, oo ay mar hore jeclaayeen, laakiin waxaan hubaa in maanta ayna jacayl u haynin, waayo Jwxo laftigeeda ayaa eedo badan ka gashay shacabka gabalada Nogbeed. Waxay iska dishaa Jwxo dadweynaha degan gabalka Nogob, deedna waxay ka qaadataan qoryahooda, dadweynaha gabalka Nogbeed waxaa ay aad uga hooseeyaan dhinaca nolosha iyo aqoonta gabalada kale ee Somalida Ogadeeniya.
Waxaana sida la sheegayo haatan ku dhuumaalaysanaya Jwxo-shiil, awood ma laha ay ku yidhaahdaan naga taga waa nalagu kiin dili idinkuna waad na dilaysaane. Warar hoose ayaa sheegaya in dadkani ay daadsan yihiin magaalooyinka yar yar ee oromada iyaga oo ka cararaya degaanadooda oo ay dab galinayaan Kaalinka iyo JWXO.
Sidaas si la mid ah, waxay ka socotaa gabalka wardher oo inta badan dadkii deganaa ay joogaan dalka Somaliya oo aan laga sugaynin in ay ku soo laabtaan dhulka Somalida Ogadeeniya, meelihii ay dagi jireena waxaa soo buux dhaafiyey dad ka soo guuray xadka Somaliya.
Hadaba, Maxaa dadweynoow xigi doona arimahan ka socda dhulka Somalida Ogadeeniya ee ay wadaan Jwxo-shiil iyo maamulka Kaalinka 5aad.
Khilaaf Xoogan oo Soo Kala Dhex Galay Jwxo-shiilada iyo Iyada oo Laga Yaaban Yahay in Qaarkood ay Iska Xaadiriyaan Kaalinka 5aad